Waa Maxay Dimuqraadiyad? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxay Soomaalidu Ka Barani Karaan qaladkii ay Gashay IGAD?
Caalamadaha Lagu Garto Maskax Garaadka iyo Sida Lagu Daawayn Karo
4-shey oo Ay Cilmi Baarayaasha Caafimaaka ku Sheegeen Halis Caafimaad
Jama Hursow — July 19, 2018
Micno ahaan ereyga ‘Dimuqraadiyad waa ismaamul dadweyne oo midaysan isla markaasna loo simanyahay xuquuqda rag iyo dumarba. Xuquuqdaas oo ah inaad adigu wax dooran karto iyo in lagu doorankaro, sidoo kale inaad ka qeyb-qaadato waxyaabaha ugu muhiimsan bulshada adigoo ku muujinaayo rabitaankaaga taas oo ah ‘Haa, mise Maya. Dabcan, waxaan maqaalkaan usoo qaatay ayaa waxay tahay inan fahano micno ahaan ‘maxay xambaarsantahay dimuqraadiyad, xaggee ka imaaday? anaga haddii aan Soomaali nahay maku dhaqanaa dimuqraadiyada?
Ereyga ‘Dimuqraadiyad wuxuu asal ahaan kasoo jeedaa wadanka Gariiga (Greece). Micno ahaan waa labo erey ee kala ah (dêmos) oo ah dadka iyo (kratos) oo ah awooda. Dimuqraadiyadda waxay bulshada wadanka kunool xaq usiinaysaa inay ka qayb qaataan siyaasada dalka iyo inay cabirikaraan fikirkooda siyaasadeed.
Anaga haddii aan nahay Soomaali waan sheganaa dimuqraadiyadda laakiin kuma dhaqano, iyadoo lagayaabo dadka qaar inay u arkaan inay tahay arrin diin ahaan aanan wanaagsanayn. Waxaan dhihi karaa aniga iyadoon lagu xadgudbeynin diinta ayaan ku dhaqmi karnaa Dimuqraadiyadda. Sidda inaan sameysano nidaam ku dhisan sharci iyo kala dambayn, taasoo ku saleysan isixtiraam. Waayo waa muhiim bulshada in ay yeeshaan sharci kalahagi kara kunna saleysan ‘Dimuqraadiyad, taasoo ah rabitaan shacab. Dimuqraadiyadda waxay muhiim u tahay qof walba, waayo qof walba wuxuu xaq u helaa in ladhageysto rabitaankiisa, taas oo ah xuquuqda muwaadinka.
Tusaale, maanta Soomaaliya waxaa wax doorta koox yar, ama shaqsiyaad yar, halka wadamada kale ee sheegto Dimuqraadiyadda ay shacabka wax doortaan. Doorashadaas oo ah mid toos ah, iyo mid aan toos ahaynba. Mid tooska ah waa tan shacabka aftida looga qaado arin gaar ah oo markaas ka taagan dalka . Mida aan tooska aheenna waa tan shacabka ay ku doortaan qofkii uqaban lahaa hogaanka dalka. Marka waxaan dhihi karnaa Soomaaliya wali magaarin dimuqradiyada meshii lagaraway caqabada jira aawadeed.
Hadaba, astaamaha u gaarka ah ‘Dimuqraadiyadda waa doorashooyin xor ah, taas oo ah qof iyo cod, islamarkaasna laraaco meesha dadka u baadanyihiin. In xuquuqda aas-aasiga ah ee bulshada la illaaliyo. In sidoo kale la`ilaaliyo xuriyatul qoolka, simnaanta iyo siyaasada. Iyo waliba in loo simnaado sharciyada iyo xeerarka bulshada.
Tags: Waa Maxay Demuqraadiyad (Democracy)?
Next post Waa Maxay Findoob?
Previous post Nin Dadaalkiisa Ku Muteystay Abaalmarin.. - aqristoow dadaal adigana!
Waa qoraa katirsan Afrikaan. Wuxuu wax qoraa arrimaha bulshada, siyaasada, waxbarashada, taariikh-nololleedka. Qoraaga wuxuu cilmi gaar ah u leeyahay cilmiga injinaarka saadka ’’logistics”. Qoraaga waa arday ku jira diyaariska heerka koowaad ee waxbarashada jaamacada.
July 20, 2018 at 11:24 am	— Reply
Aniga aragtidayda hadaynu u fikirno si cilmiyaysan oo caqliyaysan oo aynaan si indha la’aana dad kale fikradahooda u raacin sharciga ilaahay wax ka dhiman oo inooga baahan in aynu inagu samaynaa ma jiro
In ka badan 1300 oo sano ayay muslimiintu ku soo dhaqmayeen dastuurka ilaahay kuna qanacsanaayeen
Markaa marakaynu muslimiin nahay wax aynu uga baahanahay sharci bin’aadam inagoo kii ilaahay hasana ma jiro
Xoriyadana ilaahi ku abuurtay baan xor kaa dhigan
July 21, 2018 at 9:55 am	— Reply
Maxamed Cumar, waan soo dhaweeyna fikirkaada. Dimuqraadiyada ayaa ah in la is dhageeysto, iyadoo ruuxwalba uu fikradiisa siyaasadeed cabirayo. Soomaaliya waa wadan Muslim ah, saasi tahay marka dhinacyo badan laga eego weey qaadatay Dimuqraadiyada, sida siyaasada oo kale. Lakin fikrada aan ka qabo Dimuqraadiyadda, wixii diinta jabinaya waan iska dhaafi karnaa. Maxaa yeelay wadamada qaatay ama ku dhaqma Dimuqraadiyadda majiro wadan buuxiyay dhamaan shuruudaha Dimuqraadiyada.
February 21, 2020 at 2:23 pm	— Reply
Asc hadii aan fikirkayga ka dhiibto somalia iminka kuma dhaqmi karto nidaam dimuqraadiyada sababtoo ah siyaaasiyiinta hogaaanka dalka u haya badankoodu ma maraan xeerka saxda eh ee dimuqraadiyada sidoo kale amni daro darteee banan loo qaban karin